DHEEL ISTARAATIJI AH: Turkiga oo ka faa’iidaystey khalad wayn oo ay Iiraan ka samaysay dagaalka Nagorno-Karabakh (Qaybtii 2-aad) | Hadalsame Media
DHEEL ISTARAATIJI AH: Turkiga oo ka faa’iidaystey khalad wayn oo ay Iiraan ka samaysay dagaalka Nagorno-Karabakh (Qaybtii 2-aad)
(Hadalsame) 23 Nof 2020 – Markii ay miisaanka saartay fursadeheeda waxaa laga yaabaa in Iiraan go’aansatay in ay xiriir labo geesood ah la yeelato Azerbaijan, malaha si ay ciidda madaxa uga ceshato. Yeelkeede guusha Azerbaijan waxaa ka dhashay wixii Iiraan ka baqaysay oo ah guusha Turkiga.
Ankara si cad ayay Azerbaijan u taageertay ayada oo ka iibisay noocyada kala duwan ee dayuuradaha Dharoonnada kuwaas oo dhaawac culus u gaystay ciidanka Armenia. Wax yar ka hor intaan dagaalku bilaabay Turkigu waxay carbis ciidan la sameeyeen Azerbaijan ayaga oo sidaa oo kale diyaaradohooda F-16ka geeyay Azerbaijan.
Iskaashiga Turki iyo Azerbaijan waa uu sii kordhayay sannadihii tagay. Bishii tagtay ayada oo weli dagaalka Nagorno-Karabakh socdo labada dal waxay saxiixeen mashquuc istaraatiiji ah oo loogu magacdaray Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline (TANAP) kaas oo gaaska Azerbaijan si toos ah Yurub u gaynaya kaddib marka uu Turkiga sii dhexjibaaxo.
Taasi waxay shiiqinaysaa saamaynta Ruusha iyo Iiraan. Waxaa la sheegay in Azerbaijan noqotay dalka gaaska ugu badan Turkiga u dhoofiya siddeedii bilood ee sannadkaan ugu horraysay kaas oo ka saramaray kan Ruushka iyo Iiraan Turkiga u dhoofiyaan. Sidaa oo kale Turkigu waxay gobolka Nakhchivan u dhiseen dhuumo gaaska geeya taas oo khatargalinaysa gaaska Iiraan.
Kaddib heshiiska ay Ruushka garwadeenka ahaayeen ee Azerbaijan iyo Armenia dhexmaray baarlamaanka Turkigu waxay ansixiyeen xeer dawladdu ciidan ugu daabbulayso Nagorno-Karabakh taasina waxay Turkiga u oggolaanaysaa in saami ku yeeshaan gobolka sida Ruushka oo kale.
Taas oo Iiraan ka dhigaysa awood daris ah oo arrinta gobolka waxba laga waydiinayn saamaynta kaliya ee ay leedahay ka yeelaysa mid dhaqan oo kaliya.
Previous articleDaraasad laga sameeyey halis kusoo wajahan Muslimiinta & ajnabiga ku dhaqan Galbeedka
Next articleHay’adda Culimada Soomaaliyeed oo ka dayrisay khilaafka taagan kuna baaqday in la xalliyo muranka Guddiga Doorashooyinka (Bayaan)